RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal guusha soo laabashada ahayd shalay ka gaartay Man City ee FA Cup – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal guusha soo laabashada ahayd shalay ka gaartay Man City ee FA Cup
Haaruun April 24, 2017
(London) 24 Abriil 2017 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guul soo laabasho ah 2-1 kaga gaartay shalay kulan ka tirsan afar dhammaadka FA Cup-ka naadiga Manchester City, waxaana ay ballan ka sameysatay Chelsea oo ay la ciyaari doonto Final-ka FA Cup-ka.
Man City ayaa goolka la horreysay waxaana u dhaliyey Aguero, laakiin Gunners ayaa la timid goolka barbaraha waxaana u dhaliyey Nacho Monreal, kulanka ayaana 90-ka daqiiqo ku dhammaaday barbaro 1-1.
Waxaa lagu kordhiyey kulanka 30 daqiiqo oo dheeri ah intii lagu guda jiray daqiiqadahaas dheeriga ahna kooxda Arsenal ayaa la timid goolka ay guusha ku qaadatay waxaana u dhaliyey Sanchez.
>- Arsenal ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay taariikhda ee 20 jeer gaarta final-ka FA Cup, waana rikoodh iyaga u yaala haatan.
>- Kani waxa uu ahaa kulankii 50-aad ee uu Pep Guardiola hoggaamiyo kooxda Man City isagoo tababare ah, laakiin waa markii ugu horreysay oo uu soo magacaabay shax uusan wax is bedel ah ku saynin, minaca kulankii kan Arsenal ka horreeyey shaxdii uu garoonka ku soo bilaabay ayuu kulankaanna ku soo galay.
>- Sergio kun Aguero oo ka tirsan kooxda Man City ayaa gool dhaliyey saddex kulan oo xiriir ah kulamada FA Cup-ka, laakiin kooxdiisa ayuu u soo saari waayey kama dambaysta tartankan.
>- Nacho Monreal oo goolka barbaraha kulankan u dhaliyey Gunners ayaa labadiisii gool ee ugu dambeeyey oo uu u dhaliyey kooxdiisa Arsenal, waxa uu ka kala dhaliyey labada Manchester ee Man City iyo Man United, labada goolna waxa uu kaga dhaliyey tartankan FA Cup-ka.
>- Alex Oxlade-Chamberlain ayaa caawiye ka ahaa mid kasta oo ka mid ah labadii gool ee ugu dambeeyey oo uu Nacho Monreal u dhaliyey kooxdiisa Arsenal.
>- Haddii aynu eegno Rikoodhka afar dhammaadka ama Semi-finallada FA Cup ee tababaraha Arsenal Arsene Wenger, waxa uu ciyaaray 11 afar dhammaad oo FA Cup ah, waxa uu guulaysatay 8 kulan, waxaana la garaacay kaliya 3 kulan.
>- Arsenal ayaa aaday ama u baahatay waqti dheeri ah (extra-time) saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay afar dhammaadka ama Semi-finalka ciyaartay tartankan FA Cup, waxaana saddexda kooxood ay kala yihiin:-
2014 vs. Wigan
2015 vs. Reading
2017 vs. Man City
>- Manchester City ayaa taariikh cusub ka samaysay tartanka FA Cup-ka, waxaana ay noqotay kooxdii ugu horreysay ee isticmaasha afar bedel, kulankan ayayna bedelkooda afaraad ku keeneen Kelechi Iheanacho iyagoo ku bedelay Raheem Sterling.
>- Kooxda Arsenal ayaa hadda guul gaartay todobadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku ciyaartay garoonka Wembley.
>- Alexis Sanchez ayaa goolal badan Arsenal ugu dhaliyey garoonka Wembley waxaana uu garoonkaas kooxdiisa Gunners ugu dhaliyey 4 gool, waana in ka badan xiddigaha kale ee kooxda taariikhda, si kale haddii loo dhigo Sanchez waa gooldhaliyaha ugu sarreeya Arsenal ee garoonka Wembley.
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Manchester United guusha ka gaartay Burnley ee Premier League
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Liverpool guuldarrada kala kulantay Crystal Palace ee Premier League